Beautify keung wa: March 2012
လူတွေဟာ အသက်ကြီးလို့ ရင့်ကျက်တာမဟုတ်သလို အသက်ငယ်လို့ မရင့်ကျက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုကို အကြိမ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ရဲပြီး ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ရင် ရင့်ကျက်တဲ့လမ်း၊ အောင်မြင်တဲ့လမ်းဆီကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပေးဆပ်ဖို့လဲမဝံ့၊ စောင့်မျှော်ဖို့လဲမလုပ်ဘဲ လွယ်လွယ်ပြော၊ လွယ်လွယ်လက်လွတ်တတ်သူက ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်တဲ့လမ်းဆီ မရောက်နိုင်ပါဘူး။
ရင့်ကျက်သူမှာမရှိသင့်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ ---
(၁) ချက်ချင်းတုန့်ပြန်တယ်၊ ဆင်းရဲသားစိတ်ထားရှိတယ်။
(i) အခွင့်အရေးတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့တိုင်း သူတို့တွေ့တာက အခွင့်အရေးထဲက အခက်အခဲကိုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် "No"လို့ ချက်ချင်းငြင်းဆန်တတ်သူဖြစ်တယ်။
(ii) ဆင်းရဲသားစိတ်ထားလိုမျိုး နေ့ချင်းညချင်း ကြီးပွားချင်ကြတယ်။ အလွယ်တကူရတဲ့အရာက တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ မဟုတ်သလို တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာကလည်း အလွယ်တကူ မရနိုင်ပါဘူး။ အိုလံပစ် ရွှေတံဆိပ်ပိုင်ရှင်တွေက တစ်ညတည်း ကြိုးစားခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ရလိုက်တာက သူတို့ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ရလဒ်အတွက် လူတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွေဖြစ်တယ်။ "Rich Dad Business School" စာအုပ်မှာပြောထားတာက အမေရိကန်မှာ ထီတစ်သန်းဆုပေါက်သူတွေဟာ ၅နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ဘဝက အရင်ကလောက်မပျော်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
(i) ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကို မပြောင်းလဲချင်ဘူး
လူလူချင်းကြားမှာ အခြေခံကွဲပြားနေတဲ့အချက်က တွေးခေါ်နည်း ခြားနားတာပဲဖြစ်တယ်။ အောင်မြင်သူဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကို အရင်ဆုံးပြောင်းလဲပစ်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် အပြုအမူကို ပြောင်းလဲရပါတယ်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုဆောင်ရွက်တဲ့အခါ အခက်အခဲ၊ အဟန့်အတားကို သင်အရင်ဆုံးမြင်ရင် အောင်မြင်ဖို့မပြောနဲ့ မဖြစ်မြောက်တဲ့အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှာ သင်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ဟောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်ဆိုတာ... ချက်ချင်းတုန့်ပြန်တာ၊ ဆင်းရဲသားစိတ်ထားရှိတာ၊ အခက်အခဲကြုံတာနဲ့ နောက်ဆုတ်ပြေးတာ.. တွေဖြစ်တယ်။ ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အားက အရာအားလုံးကို သိမ်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဟောင်းအိုတဲ့ အပြုအမူဆိုတာ... အရက်သောက်တယ်၊ ဖဲရိုက်တယ်၊ အကျိုးမရှိတဲ့ ဖြေဖျော်မှုတွေဖြစ်တယ်။
(ii) တခြားလူကို နောက်ကွယ်မှာ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ဖို့ နှစ်သက်တယ်
ဒီလိုလူမျိုးကို ကျွန်တော်တို့က အားယားနေသူလို့ တင်စားတယ်။ ဒီလိုစကားကို ကျွန်တော်တို့ နားမထောင်ဘူး၊ မပြောဘူး၊ လက်ဆင့်မကမ်းဘူး။ သူပြောဆိုဝေဖန်တဲ့စကားက မှန်တယ်ထားဦး သူ့အတွက်လည်း ဘာကောင်းကျိုးမှ မရှိပါဘူး။
(iii) အမြဲညည်းတွားတယ်၊ အပြုအမူ အပျက်ဆောင်တယ်
လူဆိုတာ ခြောက်ပစ်မကင်းပါဘူး။ ချွတ်ယွင်းချက် အနည်းအများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားအတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ကို ကောင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက သူ့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ကိုပဲ အမြဲမကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သူ့အပေါ် ကိုယ်မကျေမနပ် ညည်းတွားတာတွေက မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် မညည်းတွားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းက အောင်မြင်သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မညည်းတွားလို့ပါပဲ။
(iv) သင်ယူဖို့ ငြင်းဆန်တယ်၊ ပြောင်းလဲဖို့ ငြင်းဆန်တယ်
၂၁ရာစုလောကရဲ့ထူးခြားတဲ့ လဏ္ခာသုံးရပ်က ... အမြန်နှုန်း၊ ပြောင်းလဲနှုန်းနဲ့ ကပ်ဆိုက်နှုန်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းဗျူဟာက သင်ယူမယ်၊ လုပ်ငန်းတွေကို ပြောင်းလဲမယ်။ သင်မြန်မြန်သင်ယူနိုင်လေ သင့်ပြောင်းလဲနှုန်းကမြန်လေ အောင်မြင်မှုကို သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရလေဖြစ်တယ်။ ဒီကနေ့ခေတ် လုပ်ငန်းတွေရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုက လူရဲ့အရည်အချင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်တယ်။ လူရဲ့အရည်အချင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုက သင်ယူခြင်းရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်။ ကပ်ဆိုက်တဲ့ကာလမှာ သင်အောင်မြင်ချင်ရင် များများသင်ယူရတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ် သူဌေးသူကြွယ်တချို့ဟာ နောင် ၅နှစ် ၁ဝနှစ်မှာ ၈ဝ%က ဒေဝါရီခံရကိန်းရှိတယ်။ တကယ်လို့ သင်အောင်မြင်ချင်ရင် သင်ယူရမယ်၊ ပြောင်းလဲရမယ်။
(၃) ခံစားချက်ရဲ့ အထိန်းအချုပ်ကို အမြဲခံတယ်
လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းတွေ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဟာ လူလူချင်းကြား သည်းမခံနိုင်လို့ ဖြစ်လာတာတွေဖြစ်တယ်။ တချို့က မဖြစ်စလောက်ကိစ္စနဲ့ ဒေါသအကြီးအကျယ်ထွက်တယ်။ ပေါက်ကွဲတယ်။ အောင်မြင်ခြင်းအတွက် အခြေခံအချက်(၅)ချက်မှာ တစ်အချက်က ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ နှစ်အချက်က ကျန်းမာရေး။ သုံးအချက်က အချိန်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ လေးအချက်က ဘဏ္ဍာစီမံခန့်ခွဲရေး၊ ငါးအချက်က ကောင်းမွန်တဲ့ လူလူချင်းဆက်ဆံပြောဆိုရေးတွေဖြစ်တယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ လူလူချင်းဆက်ဆံပြောဆိုရေးရဲ့ အဓိကအချက်(၃)ချက်က
(i) တခြားသူကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက် ပိုဂရုစိုက်တာဖြစ်တယ်။
(ii) အပြစ်မရှာဘူး၊ မညည်းတွားဘူး၊ မဝေဖန်ဘူး။ များများချီးကျူး ချီးမွမ်းတယ်၊ များများခွင့်လွှတ်နားလည်တယ်။
(iii) နားထောင်ကောင်းသူ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းသူ လုပ်တယ်။ ဂရုစိုက်ဖော်ရွေမှုက အေးစက်လျစ်လျူရှုမှုထက်များတယ်။
(၄) စိတ်မှန်းနဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်၊ မှန်ကန်တဲ့ အကြောင်းရင်းကို အခြေမခံဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ လူတော်တော်များများက ကိစ္စရပ်တွေကို စိတ်မှန်းနဲ့ပဲ ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာက ဒီလိုပါ။ ကျွန်မထင်တာက ဟိုလိုပါ။ ထင်တာပြောရရင်...
(၅) အလုပ်လုပ်ရမှာ ယုံကြည်မှုကို အမှီမပြုဘူး။ လူ့အပြောကိုပဲ အမှီပြုတယ်
လူ့ဘဝက ကိုယ့်အတွက်ရှင်သန်တာဖြစ်တယ်၊ သူတစ်ပါးအတွက် ရှင်သန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတစ်ပါးရဲ့ပါးစပ်က သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက် ပြောချင်ရာပြောပါစေ။ ဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ လမ်းမှားညွှန်ပြပြီး အဲဒီအမှားအတွက် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပေးသူ မရှိပါဘူး။ တကယ့်လမ်းမှန်ကို ညွန်ပြတဲ့ ဆရာကောင်းသမားတွေ ပေါများပါတယ်။
ဒီလောကရဲ့လူအုပ်စုကို နှစ်ဖွဲ့ခွဲရင် တစ်ဖက်က ၅%နဲ့ ကျန်တစ်ဖက်က ၉၅%ဖြစ်တယ်။ ၅%သော အောင်မြင်သူတွေက မအောင်မြင်ခင်မှာ လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ဝေဖန်တာကို ခံရတယ်။ အရူး၊ လူတုံးလူအလို့ အခေါ်ခံရတယ်။ လေဒီယိုတီထွင်ခဲ့သူဟာ အရူးလို့စွပ်စွဲခံရပြီး အရူးဆေးရုံအပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ လူအများရဲ့(၉၅%)ဘဝလို့ ကျွန်တော်တို့ မဖြတ်သန်းချင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခေါ်ခံရပါစေ၊ အလှောင်ရယ်ခံရပါစေ ကျေနပ်ပါတယ်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 3:00 AM 1 comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 2:56 AM 1 comments
The Maha Bodhi Society of India was founded
by Anagarika Dhammapala in May, 1891 for
the purpose of resuscitation Buddhism in India
and of restoring the ancient Buddhist shrines
at Buddha Gaya, Sarnath and Kushinara.
Having its Headquarters in Calcutta its main attention
has been paid in the restoration and revival of the glory
and sanctity of Buddha Gaya.
For this he founded the Society’s first Centre at Buddha Gaya.
Then centers were established in Sarnath,
Sanchi, Lucknow, Orissa, New Delhi, Chennai Ajmer, Bangalore etc.
Under the able guidance of Ven. Dr. D. Rewatha Thero,
Present General Secretary of the Maha Bodhi Society of India,
Buddhagaya centre is extendingacommendable service to
the Society and the Buddhist community around the globe.
Founded by Lt. Ven. Bulath Singhala Pannarama Thero ,
the dispensary looks after the needs of the local and
needy people by giving them free medicines and treatment.
A team of dedicated doctors and
staff help in maintaining the proper functioning of the Dispensary.
The Maha Bodhi Vidyapeeth isafree school which is dedicated
in giving the gift of Knowledge to the needy and
less fortunate children of the locality.
It hasastrength of about 450 students and
is still growing in numbers. The Centre believes
that the child who attaings education can an asset to the Society.
Started in 1997, the Ambulance service is serving
the community by taking the sick peo;oe to hospitals
ataminimum cost so that the service is inexpensive and
easy to use by less fortunate ,ambulance service
the Buddhagaya Centre of the Maha Bodhi Society of India
is one of the first to reach the spot of any natural calamity of disaster.
The Buddhagaya Centre also provides free sponsorship to
the deserving candidates who are physically handicap
children and is presently sponsoring few such deserving candidates.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:08 AM0comments
Published on Friday, 23 March 2012 12:09
ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ Times Higher Education အဖွဲ့ကြီးက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် ၁၀၀ စာရင်းကို မကြာခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၉ နိုင်ငံက ပညာရှင် ၁၇၅၅၄ ဦးနဲ့အတူ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ စစ်တမ်းနဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်ညွှန်း Time Higher Education
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:00 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:23 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 8:18 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:41 AM0comments
ဒေါသကိုပယ် မေတ္တာကိုလွယ် သတိမပြတ်ရှု့မှတ်နေလျှင်
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 7:48 AM 1 comments
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၌နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းလူမျိုး အပြားကို ဆိုလိုသည်။ ဤ၌ ရှေးဟောင်းရာဇ၀င်လာ ဆိတ်သုဉ်းလေပြီးသော လူမျိုးများနှင့် နောက်ပေါ် စာအုပ်စာတမ်း မှတ်သားချက်တို့တွင် ပါဝင်တွေ့ရှိရသော လက်ရှိပြည်ထောင်စုသား လူမျိုးများကိုပါ ရေတွက်ဖေါ်ပြလိုက်သော်လည်း များစွာ ကျန်ရှိပေသေး၏။
(၁) ချင်းလူမျိုး-မြောက်ပိုင်းချင်းများကား ချင်းတောင်နှင့် အထက်ချင်းတွင်းခရိုင်၌ နေကြ၍ အလယ်ပိုင်းချင်းနှင့် တောင်ပိုင်းချင်းတို့ကား ပခုက္ကူ, စစ်တွေခရိုင်, ချင်းတောင် နှင့် တောင်ဘက်ရှိ တောင်တန်းတခို၌ နေထိုင်ကြ၏၊ ချင်းမျိုးကွဲ များစွာရှိကြောင်းကိုလည်း သိရသေးသည်၊
(၂) ကမိ လူမျိုးနှင့်၊
(၃) မြိုလူမျိုး- ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၌ နေကြသည်၊
(၄) ကဒူး လူမျိုး- ကသာနှင့်အထက် မြန်မာနိုင်ငံ(မြန်မာပြည်) အထက်ချင်းတွင်းခရိုင် တလျှောက်၌ နေကြသည်၊
(၅) ကချင် လူမျိုး- အထက်မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက် အကျဆုံးသော အရပ်တို့၌ နေကြသည်၊
(၆) မရူ လူမျိုး၊
(၇) လရှီ လူမျိုး၊
(၈) ဇီ လူမျိုး- မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ဖက်စွန်း မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် အခြားခရိုင် များ၌ နေကြသည်၊
(၉) လီရှော သို့မဟုတ် လိဆော လူမျိုး- သံလွင်တောင်ခြား, ရွှေလီနှင့် ဧရာဝတီအတွင်းရှိ တောင်များ, အထက်မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည် အရှေ့မြောက်ဖက်စွန်း၌ နေကြ၏၊
(၁၀) လားဟူ သို့မဟုတ် မုဆိုးလူမျိုး၊
(၁၁) နန်း သို့မဟုတ် ရ၀င်းလူမျိုး- ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ နေထိုင်ကြသည်၊
(၁၂) ကော သို့မဟုတ် အခ လူမျိုး- ကျိုင်းတုံနှင့်မဲခေါင်နယ် အရှေ့ဖက် နယ်တလျှောက်၌ နေကြသည်၊
(၁၃) ပလောင် လူမျိုး- ရှမ်းပြည်နှင့်မိုးကုတ်နယ်တလျှောက်၌နေကြသည်၊
(၁၄) ရီယန်း လူမျိုး- တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဖက်၌နေကြသည်၊
(၁၅) ၀ လူမျိုး- ရှမ်းပြည်နယ်၏ အရှေ့ပိုင်း တရုပ်ပြည်နယ်ခြားအနီး၌နေထိုင်ကြသည်၊
(၁၆) ကရင် လူမျိုး- အောက်ဗမာပြည်၏ အရှေ့ဖက်, တောင်ဖက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အနောက်ဖက်နှင့် တောင်ဖက်တလျှောက်၌ နေထိုင်ကြသည်၊ ၄င်းတို့လည်း မျိုးပြားများစွာရှိသေး၏၊
(၁၇) ပအိုဝ့် သို့မဟုတ် တောင်သူ လူမျိုး- အောက်မြန်မာပြည်သထုံခရိုင်နှင့် တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ် အချို့တွင် နေထိုင်ကြသည်၊
(၁၈) ဆလုံ လူမျိုး- မြိတ်ကျွန်းစု၌နေကြသည်၊
(၁၉) ကယား သို့မဟုတ် ကရင်နီ လူမျိုး- ကယားပြည်နယ်၌နေကြသည်၊
(၂၀) ရှမ်း လူမျိုး၊
(၂၁) မိုင်းသာ လူမျိုး၊
(၂၂) ဒရယ် လူမျိုး၊
(၂၃) ရခိုင် လူမျိုး- ရခိုင်တိုင်းနယ်၌နေကြသည်၊
(၂၄) ဗမာ ၊
(၂၅) ထားဝယ် လူမျိုး- တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတလျှောက်၌နေကြသည်၊
(၂၆) ယောလူမျိုး- ပခုက္ကူခရိုင် အနောက်မြောက်ရှိ ယောနယ် တလျှောက်၊
(၂၇) ဒနု လူမျိုး၊
(၂၈) ကွေ သို့မဟုတ် ယပိန်း, ဇပိန်း လူမျိုး၊
(၂၉) ဖုန် လူမျိုး၊
(၃၀) အင်းသား လူမျိုး၊
(၃၁) တောင်ရိုး လူမျိုး၊
(၃၂) ဒိုင်နက် လူမျိုး၊
(၃၃) ပဒေါင်း လူမျိုး- မြန်မာဆက်များ၊ အများအားဖြင့် ရှမ်းပြည်တောင်တန်းတလျှောက်မှာ နေထိုင်ကြသည်၊
(၃၄) မွန် လူမျိုး၊
(၃၅) ကမု လူမျိုး၊
(၃၆) ယအို လူမျိုး၊
(၃၇) မိအို လူမျိုး၊
(၃၈) ဒနော လူမျိုး- မွန် ခမာဆက် လူမျိုးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၌နေကြသည်၊
(၃၉) နာဂ လူမျိုး-နာဂတောင်တလျှောက်၊
(၄၀) ကုကီ လူမျိုး၊
(၄၁) ကသည်း လူမျိုး၊
(၄၂) ထမန် လူမျိုး- အထက်ချင်းတွင်းနယ် တောင်ရိုး တောင်ကြားတို့၌နေကြသည်၊
(၄၃) ဂျင်းဖေါ သို့မဟုတ် သိန်းဖော လူမျိုး၊
(၄၄) ခမင် လူမျိုး၊
(၄၅) ခနုန် လူမျိုး- ကချင်ပြည်နယ်၌နေကြသည်၊
(၄၆) ခေါင်းတို လူမျိုး- တောင်တန်းနယ်သားများ၊
(၄၈) ကမ်းယံ လူမျိုး၊
(၄၉) သက် လူမျိုး- ရှေးဟောင်း မြန်မာလူမျိုးများ။
(၅၀) ကမန်လူမျိုး ၊ ရခိုင်လူမျိုး စုထဲတွင်ပါဝင်သည်။ 
↑ သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် (၂၀၀၇ တည်းဖြတ်ခြင်း)
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 12:03 AM0comments
မွန်ခမာ အုပ်စုဝင် မွန်အမျိုးသားများသည် လွန်ခဲ့သောသမိုင်းမတင်မီခေတ် နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာက တရုတ်ပြည် ယန်စီကျန်မြစ်ဝှမ်း (Yangtze Kiang) မှ တောင်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဆင်းသက်လာကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အရင်ဆုံး ဆလုံ နှင့် မလေးတို့ ဝင်ရောက်လာပြီးနောက် မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုဝင် လူမျိုးများ ဝင်ရောက်လာကြသည်။ ထိုသူတို့မှာ ဆလုံမလေးအုပ်စုဝင်တို့ထံမှ ယဉ်ကျေးမှုအချက်အလက် များကို ယူဆောင်လာကြသည်။ သီးနှံအဖြစ် စပါး၊ နှံစား ပြောင်း၊ ပဲကြီး၊ ပဲလွန်း၊ ကြံ၊ ပိန်းဥ၊ မျောက်ဥ၊ ကျောက်ဖရုံနှင့် ဗူး စသောအသီးအနှံများ စိုက်ပျိုးပုံလက္ခဏာရှိခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်အခါမှပင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေထိုင်သော မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ ရှေ့ပြေး လူမျိုးတို့ စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်လာကြသည်။ ထို့နောက် တောင်ယာစိုက်ပျိုးမှုသာမက မြေပြန့်တွင်လည်း ထွန်ယက်စိုက် ပျိုးလာကြသည်။ ရှေးအခါက စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်မှုကို အခြေပြု၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရွာတည်း ဟူသောအုပ်စုဝင်များမှာ တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာ၍ ရွာကြီးများ ဖြစ်လာ၏။ ၎င်းမှတဆင့် မြို့များ ၎င်းတို့ကို စုရုံးလျှက် နိုင်ငံငယ်များ စတင်ပေါ် ပေါက်ခဲ့၏။ ၎င်းတို့မှာ လူမျိုးအလိုက် ခေါ်သော နိုင်ငံငယ်ကလေးများ ဖြစ်ကြ၏။
၎င်းတို့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာလည်း ကျောက်ခေတ်လူသားတို့၏ဝတ်စားဆင်ယင်မှုဖြစ်သော သစ်ရွက်၊ သစ်ခက်တို့ကို ဝတ် ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ လက်ပံပင်မှ ရရှိသော လဲ၊ မှို့ တို့ကို ပြုပြင်စီမံ၍ အဝတ်အထည် ယက်လုပ်ဝတ်ဆင်ကြသည့်လက္ခဏာများ ရှိ ခဲ့သည်။ ၎င်းမှတဆင့် ထိုအဝတ်အထည်များကို မဲနယ်ဆိုး၍ ဝတ်တတ်လာကြသည်။ ဝါဂွမ်းကား မပေါ်သေး။
ထို မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုဝင်တို့သည် မိမိတို့ထက် အရင်ရောက်ရှိနေသော ဆလုံမလေးအနွယ်ဝင်တို့နှင့် မိမိတို့မျိုးနွယ် တူရှေ့လူများကို တောင်ဘက်သို့၎င်း၊ လူအရောက်ပေါက်နည်းသော တောတောင်ဒေသသို့ ၎င်း၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စေရန် ဖန်တီးခဲ့သည်။ မွန်တို့သည် တောင်ဘက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဝနှင့်ပလောင်အုပ်စုတို့သည် မြောက်ဘက် တောင်များပေါ် တွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်း မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုတို့သည် သီးခြားလူမျိုးများ ဖြစ်လာသည်။ ထိုစဉ်ကာလ မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးကိုပင် လွှမ်းမိုးခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆစရာရှိသည်။
(မှတ်ချက်- မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ ရှေ့ပြေးလူမျိုးများဆိုရာ၌ မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ တို့ထက် စောစွာရောက်ရှိ၍ ၎င်းတို့နှင့်မျိုးနွယ်တူ များဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးချင်းတူသော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းတွင် ကွာခြားလှသည်။ ၎င်းလူမျိုးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင် မတွေ့ရတော့ပေ။ ဝင်ရောက်ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်ရာတွင် အခြား မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုဝင်ထက်ဦး၍ အာရှတိုက် တောင်ဘက်စွန်းသို့ ရောက်ရှိနေကြပြီ။ ၎င်းတို့သည် နီကိုဘာ ခေါ် နာဂဘာရီကျွန်းသားများနှင့် မလေးကျွန်းဆွယ်အလယ် ပိုင်း တောတောင်များတွင် နေထိုင်သည့်ဆကိုင်းလူမျိုးများ ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့ရောက်ရှိသောအချိန်မှာ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်က ဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ )
ထို့ကြောင့် ထိုခေတ်ကို မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ ခေတ်ဟု ခေါ်တွင်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ မွန်၊ ပလောင်၊ ဝ အုပ်စုဝင်တို့ မြန်မာ ပြည်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ မိမိတို့၏ယဉ်ကျေးမှု ပါလာခဲ့သည်။ ရောက်ရှိသောဒေသရှိ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း ဆက်ခံသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း အတော်အတန် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှ လာရောက်သော အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားကုန်သည်များနှင့် လည်း ကူးလူးဆက်ဆံရသဖြင့် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုပါ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ဟိန္ဒူဘာသာအယူဝါဒ၊ စာရေးသည့်အတတ်ပညာ၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်နေထိုင်ဝတ်ဆင်မှုများကို နည်းယူပြီး မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သင့်တော်သလို ပြင်ဆင်လက်ခံ၍ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအသွင်သို့ ပြောင်းလဲယူကြသည်။ ၎င်းပြင် ထူးခြား မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအချက်တစ်ရပ်မှာ ဟိန္ဒူအယူဝါဒ ရောက်ပြီးနောက်၊ ယခုအချိန်အထိ ထွန်းပြောင်လျှက်ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ရောက်ရှိလာသည်။ ထိုသို့ရောက်ရှိလာသော ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၊ တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။ ပထမရောက်ရှိလာသော ဟိန္ဒူအယူအဆကို စွန့်ပစ်၍ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခံယူသည်။ မြောက်ပိုင်းတွင် မဟာယန၊ အရည်းကြီးတို့ သာသနာသာ ရှိနေသေးသည်။ မွန်တို့ဒေသသည် ဦးစွာပထမ ဗုဒ္ဓဝါဒထွန်းလင်းခဲ့သော ဒေသ ဖြစ်သည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:57 PM0comments
မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာသော လူမျိုအုပ်စုကြီး
ဖြစ်သည်၊ ၎င်းအုပ်စုသည် မဲခေါင်နှင့် သံလွင်မြစ်ဝှမ်းများအတိုင်း
ဆင်းသက်လာကြကာ အချို့ကကမ္ဘောဒီယားပြည်နယ် နှင့် ထိုင်နိုင်
ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကြပြီး အချို့ကမူ အနောက်ဖက်သို့ လှည့်၍ မြန်
မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ကြလေသည် ၊။ ထိုမွန်ခမာ လူမျိုးအုပ်စု
၎င်းအုပ်စုသည် သံလွင်နှင့် ဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်များကြားရှိ မြင့်မားလှသော
ရေးခဲဖုန်းတောင်တန်းများကို ဖြတ်ကျော်ရန် ခဲယဉ်းသောကြောင့်
ထိုတံတိုင်းကြီးကို ကွေ့ရှောင်ရင်း အနောက်ဖက်ဆီသို့ လှည့်ကာ အာသံပြည်
ဖက်မှလှည့်၍ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်၏ ထိုအုပ်စုတွင် ချင်းလူမျိုးတို့
သည် ပထမဆုံးဝင်ရောက်ခဲ့ချင်းဖြစ်ရာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖျားဒေသမှ အောက်ဖက်
ပင်္ဂလားပင်လယ်အော် ပင်လယ်ကမ်းခြေအထိ ရောက်သော အနောက်ဖက်
ရိုးမတောင်တန်း ဒေသများကို နေရာယူခဲ့ကြလေသည် ယခုအခါကချင်ခေါ်
ဂျင်ဖေားလူမျိုးတို့ကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ကျပြီး အထက်ပါလမ်းကြောင်း
အတိုင်း မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာကြချင်းဖြစ်ရာ ၎င်းသို့ရောက်ရှိလာ
သောအချိန်တွင် အောက်ဖက်ရှိ တောင်တန်းများကို ချင်းနှင့် ချင်းအနွယ်ဝင်များ
နေရာယူထားပြီးကိုတွေ့ရသည် ထို့ကြောင့် ၎င်းသို့ဆင်းသက်ရာ လမ်းကြောင်းကို
အရှေတောင်ဖက်ဆီသို့ လှည့်လိုက်ကာ ရှမ်းလူမျိုးများ ရောက်နင်းနေပြီးဖြစ်သော
ခနီး္တမြေပြန့်ဒေသ(Hkamti plain )ကို ဖြတ်ကျော်၍ မေခမြစ်ဝှမ်းနှင့် တြိဂံနယ်မြေ
(traingale Area) အတွင်းသို့ ဆင်းသက်လားခဲ့ကြ၏ ။ထိုအချိန်အခါတွင် တောင်
ဖက်ရှိရှမ်းလူမျိုးတို့မှာ ။တန်ခိုး အင်အားကြီးနေချိန်ဖြစ်ရာ ဂျင်ဖေားလူမျိူးတို့သည်
တောင်ဖက်သို့ ဆက်လက်၍ မဆင်းနိုင်တော့ပဲ တြိဂံနယ်မြေနှင့် ဆွန်ပရာဘွမ်ဒေသ
တို့တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရ၏ ရှေနှစ်ပေါင်းသုံးရာခန့်က အောက်
ဖက်မှရှမ်းများ တန်ခိုး ဆုတ်ယုတ်လာချိန် တွင်မူ တောင်ဖက် မြစ်ကြီးနား ဗန်မော်
ကသာ ဒေသများနှင့် မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်အထိ ပြို၍ ဆင်းလာကြလေသည်
အင်္ဂလ်ိပ်တို့ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ပြီးစအချိန်အထိ ဂျင်ဖေားလူမျိုးတို့မှာ အောက်
ဖက်ဒေသများဆီသို့ ဆင်းသက်နေကြဆဲဖြစ်သည်ဟု သိရပေသည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 11:19 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:59 PM0comments
အနော်ရထာ (သို့) ပုဂံသမိုင်းမျက်နှာစာ
အနော်ရထာလက်ထက်တွင် ထူးခြားသော နိမိတ်တစ်ခုတွေ့သဖြင့် သူ၏ ပုရောဟိတ် ဗေဒင်ဆရာများဖြစ်သော ဟူးရားဖြူ၊ ဟူးရားညိုတို့ကို မေးမြန်းရာ နောင်တွင် ပေါ်မည့် မင်းလောင်းသည် ယခု ပဋိသန္ဓေတည်နေပြီဟု နိမိတ်ဖတ်ပြကြသည်။ အနော်ရထာသည် သူ၏ ထီးနန်းကို မစွန့်ချင်သဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမအားလုံးကို သတ်စေသည်။ ထို့နောက် ကာလအတန်ကြာတွင် သတိရသဖြင့် ပုရောဟိတ်တို့အား ထပ်၍ မေးမြန်းရာ ပုရောဟိတ်တို့က ယခုလျှင် နို့စို့အရွယ်ရှိနေပြီဟု ဆိုပြန်သဖြင့် နို့စို့အရွယ်ကလေးအားလုံးကို သတ်စေသည်။ ပုရောဟိတ်တို့ကို နောင်တစ်ချိန်တွင် ထပ်၍ မေးမြန်းရာ ယခု နွားကျောင်းသား အရွယ်ရှိနေပြီဟု ဆိုသဖြင့် နွားကျောင်းသားအရွယ်အားလုံး ကို သတ်စေသည်။ နောက်နှစ်အတန်ကြာတွင် ထပ်၍ မေးသော အခါ ယခု ရဟန်းပြုနေပြီ။ အကယ်၍ နန်းတော်တွင်းသို့ ဆွမ်းဖိတ်ကျွေးပြီး နန်းသုံးခရားဖြင့် ရေတိုက်ပါက အာခံတွင်းမှ စက်ရောင်ထွက်သော သူသည် မင်းလောင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့် နန်းတော်သို့ ရဟန်းတော်များကို ပင့်ဖိတ်၍ ဆွမ်းကျွေးသော အခါ စက်ရောင်ထွက်သူကို တွေ့ရသည်။ ထိုအခါ အနော်ရထာက ဟူးရားဖြူ နှင့် ဟူးရားညိုတို့အား ဤသူသည် ငါ၏ ထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်မည့်သူလားဟု မေးရာ ဟူးရားတို့က မဟုတ်။ နောင် မင်းဆက်တစ်ဆက်ကျော်မှ မင်းဖြစ်မည့်သူဖြစ်သည်ဟု ဆိုသဖြင့် အနော်ရထာသည် ငါ့ထီးနန်းကို လုယူမည်ထင်သဖြင့် မဆိုင်သော လူများစွာကို အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်မိလေပြီဟု နောင်တရသည်။ အနော်ရထာသည် ထိုသူအား နန်းတော်သို့ ခေါ်၍ သူကောင်းပြုထားပြီး ထိုသူမှာ ခေတ်ကြာသော် ကျန်စစ်သားဖြစ်သည်။
အနော်ရထာမင်း နန်းတက်စတွင် ပုဂံပြည်၌ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ၎င်း၊ လောကနာထကို ၎င်း၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗိဿနိုး၊ ပရေမေသွာ တို့ကို၎င်း၊ နတ်နဂါးနှင့် အရည်းကြီး‎ တို့ကို၎င်း အားလုံးစုံကို ရောနှော ယောင်မှား၍ လည်းကောင်း ကိုးကွယ်နေကြလေသည်။ ထိုအခါ ယဉ်ကျေးမှုသည် မသန့်မရှင်း ဖြစ်နေလေသည်။ အနော်ရထာမင်းသည် ထိုအယူဝါဒများကို မနှစ်သက်သဖြင့် မှန်သောတရားကိုသာ တောင့်တနေခိုက် တောလည်သော မုဆိုးတစ်ယောက်သည် တောထဲမှ ထူးဆန်းသော အဝတ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဌန်ရှိသည့် လူတစ်ဦးကို တွေ့မြင်သဖြင့်စူးစမ်းရာ ရဟန်းဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ဘုရင်ကို အကြောင်းကြားသည်။ အနော်ရထာဘုရင်လက်ထက်တွင် ထိုရဟန်းမှာ ရှင်အရဟံဖြစ်သည်။ အနော်ရထာသည် ရဟန်း၏ အဆုံးအမကို ခံယူပြီးလျှင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သထုံပြည်မှ ဓမ္မဒဿီမည်သော ရဟန်းတော် ရှင်အရဟံသည် ပုဂံသို့ ရောက်လာ၍ ဟောပြောသဖြင့် မင်းနှင့် တကွ တပြည်လုံး ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ တည်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒ တည်တံ့ပြန့်ပွား ထွန်းကားရေးအတွက် အနော်ရထာမင်းသည် အားထုတ်တော်မူပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သထုံပြည် မနူဟာမင်း(မကုတ)၌ ပိဋကတ်တော်အစုံ ၃ဝ ရှိသည်ဟု ကြားသိပြန်ရာ လက်ဆောင်များနှင့်တကွ လိမ်မာသော အမတ်တယောက်ကို သထုံပြည်သို့ လွှတ်၍ တောင်းစေသည်။
ယင်းဆက်ဆံမူ့များကို မြန်မာရာဇ၀င်၊သီဟိုဠ်ရာဇ၀င် များတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။ မှန်နန်းရာဇ၀င်(အပိုဒ်၁၃၅)အရ အနိရုဒ္ဓသည် မိမိတည်ထားသော ရွှေစည်းခုံစေတီတွင် ဌာပနာရန် ဆွယ်တော်တစ်ဆူကို သီဟိုဠ်၌ အပင့်လွှတ်သည် ဟုပါရှိသည်။ စူဠ၀ံသ ပထမတွဲ(စာမျက်နှာ၂၀၂-၂၃၄) တွင်လည်း ၀ီဇယဗာဟု ခေါ် သီရိလင်္ကာဗောဓိ အမည်ရှိ သီဟိုဠ်မင်းက တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယမင်းတို့လာရောက်တိုက်ခိုက်သောကြောင့် ရာမညမင်းထံလက်ဆောင်များစွာပို့၍ သဘောင်္တစ်စင်းကို အကူအညီတောင်းသည်ဟုပါရှိသည်။ ထိုသို့အကူအညီ တောင်းခံချိန်သည် အေဒီ၁၀၆၀ မှ ၁၀၆၃ ထက်နောက်မကျနိုင်သောကြောင့် အကူအညီပေးသော မင်းမှာ သထုံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးသော အနိရုဒ္ဓမင်းကြီးပင်ဖြစ်ပေသည်။ နောက်ထပ်တကြိမ်တွင်လည်း သီဟိုဠ်တွင် သာသနာရေး ပြုပြင်မူ့များပြုလုပ်လိုသောကြောင့် သီဟိုဠ်ဘုရင်က ရဟန်းတော်များစေလွှတ်ပေးရန် အနိရုဒ္ဓမင်းကြီးထံ တောင်းခံလာပြန်သည်။ အနိရုဒ္ဓမှ ကူညီခဲ့သောကြောင့် သီဟိုဠ် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အနိရုဒ္ဓလက်ထက်ကပင် သာသနာရေးမဟာမိတ်များ အဖြစ်ဆက်သွယ်ကူညီမူ့များရှိခဲ့ကြသည်။ မင်းကြီး၏အခြားဆောင်ရွက်ချက်များ ဖြစ်သော တရုတ်နိုင်ငံသို့ချီတက်ခြင်းစသော ကိစ္စများအတွက်မူ ငြင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် ထောက်ခံရန်အတွက်မည်သည့် အထောက်အထားမှ မတွေ့ရှိရသေးပေ။အနော်ရထာ လွန်လျှင် သားဖြစ်သူ စောလူးမင်း နန်းဆက်ခံသည်။
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 6:07 AM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:33 PM0comments
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 10:06 PM0comments
Gaox nghox māwh si niag nēx nham: son kawn: pui, gaox
nghox māwh pa ih ex kawn: pui ku ngāix ku sawm:, māwh pa
ceei: ex ju tix son sang im: ex piang hak tiex heue.
Ex kawn: pui phan: gaox nghox ang:koe: ang:
ex chix klawd tix māwh sim: im: tix māwh
pui heue. lheu: khaing: in: son kīh ih mau cai:
ex kawn: peeng nang: tix cōh māwh mau
cai: tai pak tix, exkawn: vax ang: ex hiex
tawng tix yūh laih lai awm: pui tang ceu, kraung ceep mau cai:
ex du ngie piang gaox nghox tix yieh son 90% son khaing: heue.
Māwh kheu: nin: gaox nghox māwh pa kied ting buan: son:,
son ex yūh nin: ex caw tix sau: riang sau: rao tix sum: van: gaox
nghox ku kaux . lheu: khaing: an: ex kawn peeng lig ia: law
brung ih moik, ih kam: nghox, ka: sivoe in: dīx, ex shiao: krak
moi teem: tix yūh kaing jhaw:, ang: tawng tix chix shiao
ngau(phon:) sau: kawx riang tix mie ding kawx, ca: māwh ngie
uik riang nai: kaing ang: yāox tix pon to:dee keung: ex tix pon
heue. can kawn: pui ot piang gawng piang lua pa ang: koe: ping
nyia cu: yi: pau dēuh rhawm: tix ka bāux yam prāix klawng:, jao
in: si ngaung kaing saing:nghox pa yūh ex, ex sum: nai: grai:
riang ka:tix mie nyao heue.
Ih riang jung pui mai: krak, krax haok krax huan:, ang: koe:
Ex kawn: pui pa ot piang gawng piang lua, phan: ex van:
kawn: nghox dee yawm phan: ang: koe: tix khix plak, tom: hoek
ra: khix ang: chix tix sum: heue. phan: kawn: nghox ang: hoek
khix sigāix tix, nghox pa sum: ex an: ang: sok tang: heue. yam
an: phan: sum: simie nghox (1) glawm: pau pon nghox (15)
glawm: tom: hoek (20) glawm:, yam in: pui pa koe: ping nyia cu:
yi:shiao cag thai:, mai: tawng tix chix shiao ngau phon: ku ceu
ku cawng, nghox pon pui kied daing: nie haok nie huan: jao
tawng pui tix sau: ngau phon: ku ceu ku cawng, mhawm:
gawng:, mhawm: plix mai: mhawm: lhax heue.
Phan: uik simie (1) glawm: pui pon to: (100)glawm: heue.
Māwh kheu: nin: son ang: riang rao ex nai: nawk, ex caw tix
hawt daux krax pa thong: bong: pa jhi: cub caw plak sum: van:
son ngaox heue.
Gaox nghox doh yūh krax
Brax kua: kaoh khaing: gaox
Gaox ang: koe: awm: kawn: doe.
Koe: gaox sawm: awm: simiang.
Paw tik paw prah sum: nghox khawx.
Tawx dee mawx pui awx dee an:.
GRAWNG EEI: IA:
Ia: māwh to: sat pa eei: kawn:
pui ka tix ceu. ia: jiet chix tawng
bawg yam awm: ex kawn: pui,
yam ang: nari nyiang koe: dīx,
kawn: pui krox tix mhong: yam
ux ia:, voe bīh riang prāix, ia: ux
3-4 bawg, khaix an: prāix tom:
tag riang heue.
Ia: tix ngāix ux (4)bawg, ia:
peeng ex kix māwh cao: so: tix
kaoh, ex peeng tix ih nēx, ih
tom: kix, phan: māwh ia: koe:
ra: ceu, tix ceu māwh pa chix num tom: cao: tix, ra: ceu māwh ia:
tom: bhaung: heue. ia: kied koe: buan: son, son pui saux ngia,
pui saux, pui pa ang: kub nēx nham: phan: yāox tix cao ih nēx ia:
tom: ia: kix phai: deeih nēx nham:, phai: kluing, phai: koe: riang
rao, kheu yāox tix ih nēx ia: heue.
Ia: ang: deuk ngie ih nēx kawn peeng tix cōh cao: ia: mai:
tom: kix, ex kawn: pui, kawn yūh taoh yūh sawm: shiang:,
sawm: mau ka tix blah heue. phan: ex sang yūh krax lu krax tan,
ex jāh tix shiao ia: si voe. ia: māwh nēx pa yie tix rhaoh son ex
kawn: pui heue.
Sau: riang eei: ia:, saux yha: māwh ia:.
Kia: saux, taux lhaux plaux ka ia:
Hoek nyo, po: sim:, to: liag ia:
Jhawm: nyawm rawm: ia: lheu: khaing: sia:
Kia: saux, kia: yha: vīex phak ia:.
Hot cha: eei: ih ia: dia yūh ot.
SIMIANG PA MHAWM: RHAWM:
Dīx dīx koe: simiang ting tix
kaux ang: sa: gut sa: kheem:,
yax yeen, map nai: tix ih kawn:
rai peu sin: tix heue. si diex
pui yūh tix ih kaing jhaw:,
yūh tix kub sawm: nyawm ot
ku kaux daux pui paw tang:
lox six yox moing, khaing:
pāox tix, bre tix yūh sa: tixka pa ih nai: cai:
haoh, si: diex gau pui yūh nin: heue.
An: tix ngāix nawh yūh tix awm: peu sin: mai: laig laih, son
sang tawng grawng kraung ceep eep sawm: pui daux hak tiex
giex kuang: tix heue. Simiang an: ceep kraung pa cāox pa hoik
griah, mai: chawk tix liag man: luat man: pre pa kied ting ngāwh
ting jum, pui cao: cōh kraung an: yāox kraung ceep nawh mai:ah
nin: ka simiang an: “hu: hu:”maung māix pui yūh nin: ang: doh
dud tix pon liag ceu kraung ting ngāwh ting jum yūh nin: ah nan:
ka simiang an:, mai: grheu simiang an: to: heue.
Tax simaing an: ang: nye: ang: nyux, nawh nyīah khawm: ah tix
nin: “mhawm: mhawm: aux lawk ing: heue.
Nawh hoek ka tang: kaux pa cōh nang: kraung ngāwh, kraung
pa ting jum awm: pui an: phao:voe nux heue, pui an: ah nin: ceu
kraung in: phan: ang: māwh ceu laux simiang mai: pui pa mag
mi khri: mau, ang: pon liag, kheu caw kraung pa ting ngāwh ting
Jum, māwh kheu: nin: māix hu: tang: dah sawg māix liag pa yie
ngāwh ceeix awx.
Tax simiang an: pawk lox cao: cōh kraung an: ah nin: lāoh lie
ting buan: son: ka lox krai māix ka aux, aux ing: ha: awx.
Si nax ra: loe: ngāix si: miang an: kok simiang ot greem: tix
krai lao kix mhong: pa hoik yāox tix, mai: sidiex ka kix awm: in:
Rawm: loh diang simiang thai: cao:.
Paw nīeh ka pui hot, paw cot ka pui saux.
Paw nyiah ka mi, paw khi ka hot.
Paw nīeh ka kawn: doe:, paw rhoe: ka pui loeg.
Rāuh te pui tom: krox puing: klang:, lang: rhawm:.
Pui tom: mhawm: prawng prāix.
Pui ting tu, pu rhawm: ang: lang ju.
Lox in: een: ka niex praix daux rhawm: pex ku kaux awx.
RĒEH TAWNG BUAN: SON:
Dīx dīx koe: lien: tix kaux yam
hu: laig laih, nawh yāox cao:
cōh kawn: rēeh tix mu: mai:
liag kawn: rēeh an: heue.
Yam hoek lien: an: daux nyiiex
tix, nawh sau:kawn: rēeh daux
ngoi, kawn: rēeh an: ting tix ngāix
khaing: tix ngāix, lien: an: kied
daox deng: ka, pie daux alīah
singāix, ting huan: sidu pon ba: ex kawn: pui heue. Lien: an:
jhak ka rēeh, nawh kied cee rhawm: ka yāox tix mai: hu: ploi:
rēeh an: daux klawng: ting heue.
Viang nawh kied moh kawx rēeh an:, dee sidāh nawh ploi:
ka rēeh heue.
Ang: lai awt rheung glang: mawx tix naing tāoh daux hak tiex
ot lien: an: pui hak tiex an: khawm: uik to: son sang lawd luan:
khaing: krax yum, si voe pui to: khan: kix koe: rawm: klawng:
ting tix klawng:, son sang ang: kix man: pui cāox kuan kix daux
diang klawng:, yam an: pui to: pui tua khan: kix taing tix laig
daux rawm: pui plak nie yum daux rawm: an: heue. Ka daux pui
an: kix lien: pa ploi: rēeh liag tix, ka vīex ka daux kix, yam
nawh cod daux rawm: nawh mhong: tum: caong tix piang rang:
daux rawm:, nawh bre tix jhak, yāox cung tix piang rēeh paing
tix mu: heue. Rēeh paing an: vīex nawh tiang klawng: plak an:,
dee ang: pui koeng lai pon hoek, lien: an: yaog tix līh piang tiex,
rēeh yaog kaing: tix loi loi mai: deeih gi tix jhak ka lien: an:
Khaix an: rēeh koi deeih laig daux rawm: nawh ca: gi pot tix
jhak ka lien: an: heue.
Ex pa māwh kawn: pui ja lao ex ang: yūh tix tawng buan: son:
pa yūh pāox tix, pie rēeh pa māwh to: sat chix tawng tix pawk
buan: son:, phan: pui yūh kaing pa mhawm: piang ex, priex
daux rhawm: khrawm: mai: kaux tix awx. Pui pa tawng buan:
son: ang: doh yāox krax lāux.Gāux rhawm: yūh kaing mhawm:,
tawm: lox ih rhawm: rāuh rhawm: see, eei: ka kaux, saux ang:
yāox.Pui ting ngawg, kawk rhawm: ang: lang: ju.
GRAWNG SI NGĀIX.
Singāix māwh ceu pa ang: koe: mu: koe: lon: awm: koe: cie hak
tiex, singāix māwh ceu pa hax pa koek awm: ngu, singāix mai:
hak tiex singai khaing: pāox tix dim: lan ra: lag dim sien: lhak
Ex kawn: pui keud singāix iak khaing: hak tiex, viang māwh
nan: singāix kawn lheu: ting khaing: haktiex heue.
Singāix māwh pa koe: buan: son: ka piang hak tiex, can pa im:
ju piang hak tiex māwh kheu jao pa riang singāix si u: singāix
tom: yāox tix im: ju heue.
Māwh kheu: jao pa hak pa koek singāix rawm: tom: līh tix
māwh bhawm: māwh meet, tom: tīeh tix māwh pai: awm: piang
rao ma: khaix an: yam si pub ka bhaung: leet, bhaung: si kied
tom: lih tix māwh lhiex, māwh kheu: pa hax pa koek singāix tai
khan: kix mhawm: lawm: jhawm: griang chix līh tix koe: heue.
Plix khaox, plix ox, nghox khawx, chix ting chix teem māwh jao
singāix, lheu: khaing: an: kheu: pa riang singāix ex kawn: pui
yāox krax nyawm ot siu: koe: brax kua: ting huan: heue.
Sngāix jhan: riang piang hak tiex.
Nyiiex yaong: hun: prīex kun: hak tiex.
Priex khrawm: mhawm: yāox jao singāix.
Singāix jhan: riang. Lheu: khaing: shiang:.
Simiang piang tiex māwh singāix.
Singāix tix diang liang leeing ju.
Tai lawm: mhawm: pruh jao singāix
Kīh māwh pa sidaing:koe:
buan:son:, son ex kawn: pui mai: to: sat
ku ceu ku cawng te te, viang māwh
nēx māwh puan: taux lhax phan: ex ang:
sau: kīh ka daux, viang māwh pa ah ex
nēx puan:, ceet ciang mai: baik ngie
heue. Kīh ang: jhoeng: māwh ngie
nyawm yūh taux lhax puan: nēx,
prīex preem nong: nong:, kawn baox kīeh nang: ex kawn: pui
mhawm: nēx nham: singax singēh kaux hak, joh jhaung: krax
brax kua: ex kawn: pui heue.
Pui pa yūh kaing nu, pui pa mawn riang rao tix, kheu:
sidaing: līh lauh kix caw tix lheu: ih kīh khaing: pui tang: kaux,
viang māwh kawx nin: phan: ih luan: khaing: diag tix ex chix
pon jhawm: saux haok nham: ka heue.
Nēx ku ceu son sang ang: cūx sium: mai: rheung: tix een:, phan:
ex ang: sau: kīh ang: chix, phan: saux ghok, saux rhang: phak ka
rawm: kīh chix moi: chix nghie: ka, kīh māwh ceu pa pēx ceu pa
cūx pa sium: heue.
Ang: jhoeng: māwh ex kawn: pui pa moh tix ih kīh nong: nong:
pie to: tiag to: tu, khawng: ceei: brie liang ex, kix ka miag ka kīh,
phan: māwh dee kāoh kīh tix blah pui teei khaing: daux gawng:,
tix blah, dee khien: dee lāoh rawm: pang: lai: pui ka teei kīh kah
Sium: yum rham:, nēx nham: yawm.
Ih kīh chix līh koe: riang rao.
Krāwx rham:, kham: geu ceu saux rhang:
Lung lang: rawm: kīh chix moi: yūh.
Nēx nyawm kheu kīh khix lah jao ngu.
Nēx ang: koe: kīh māwh taux
Saux ang: pai: māwh yum.
PAW IAK NGAI: GAIG PIANG PĀOX TIX
Dīx dīx koe: kang koi tix mu: hu: lai ling tix sawg pa ih pa
un:, kang koi an: jiet si pub rēeh tix mu: koi hu: loi loi, kang koi
ah nin:, mīex maung hu: māix in: māix tom: doh yāox hoek ka
dee sang hu: tix yam mawx in: lie?
Rēeh pawk lox kang koi mai: ah nin:, “HE” māix paw iak
gaig ka piang pui awx, sang kīeh māix ax lah tix to: hoek ka
piang gawng tieh lie? “ HA: HA:” maung māix pa ang: pon hu:
yūh nin:, nieb pon hak aux si lah to: chix –ceu māix pa ang: tie
dud tix pon hu: phai: awm: pāox yaong: tix, hak ax si lah to: ax
jāh phao: awx, 1,2,3, to:, kang koi ka daux tix vud hoik singai
luan: khaing: rēeh tix miex nyao, kang koi keed ah nin: daux
rhawm: tix ang: rēeh pheem: in: doh tau tix krup ka aux, aux
laux tix tin: mai: it tix vud ha, rēeh hu: cie tix loi loi, ang: lai
laux lee tix, nawh tom: pon tix hoek si voe kang koi piang
Khaix hoik sak it kang koi, nawh siduat mai: kaoh yaog tix
to:, haok piang gawng, yam hoek kang koi piang gawng yāox
hoik ot rēeh sivoe tix, kang koi sidaing: kaig ka rēeh te te heue.
Kang koi keed daux rhawm: tix ah nin:, aux ce: tix māwh
pa lāoh pa lie, pa lhak pa lhiao: khaing: pāox tix, kox man: tix
iak ngai: gaig piang pui tang: kaux, ang: tie awm: pa keud pa ce:
aux, in: kied māwh krax kaig tua son aux te te heue. Kang koi
tawm: lox ah nin: pāox grawm pux aik kawn: keeing: pa moh
aux khan: kix, ting ang: ah iak ang: ah, phai: ang: ah, nhim: ang:
ah, paw vi iak gaig ka pāox ex awm: aux liak awx. Aux ang: lai
keud lai sawn: rhawm: tix nieb ce: tix lāoh khaing: pui, jao in:
aux pon krax kaig ngai: ka heue.
Paw keud tix lāoh khaing: pāox tix.
Cāox griang mhawm: riang ang: pon tiang.
Kang koi viang phai: grai: kaux ka hoi.
Toi: klawng: gawng pui ang: tie tawng.
Hoi: koi lawng krax, brax hu: khaing: nawh.
Viang māix phai: caong phan: ang: sau: riang.
Diang hu: māix lud, dee cud māix māwh an:.
GRAWNG KHIX KHRAOX.
Ex kawn: pui yam jāuh khix
tix haok keud māwh jāuh tix
haok plak klip si ngāix, viang
māwh nan: ang: tie māwh awm:
pa keud pui tix heue.
Māwh kheu: caw khix tix
hu:plak pon ngāix piang ex,
kheu: jhan: riang singāix ex
tom: ang: chix yāox khix,
tom: singāix hoik laig, ex tom:
tag yāox khix, yam an: haok
khix tix som: tom: ah ka heue.
Yam an: nawh deeih vid
si vawg tix plak līh singāix,
jee khix deeih khix tix som:
nawh deeih vid si vawg plak klip singāix hoek tom: yeet tix
Haok khix 15 som: ex ah pang: khix ka yam an: khix jiet
lawm: le awm: bia: keem gaox heue. Phan: hoek 30 som: ex
plak līh singāix ang: lai chix yāox khix, yam an: ex ah yeet khix
ka heue. Yam an: khix tom: caw tix pang: ka meung pa ot plak
klip singāix, yam yeet khix ka plak klip singāix, caw tix pang:
ka ex plak līh singāix heue.
Yam caw khix tix laig sinax haktiex kiex singāix boe hak
tiex caw tix thawng: daux khix yam yūh nan: khix jāh tix faik
kawn: pui tom: ah pom praog khix ka heue.
Kheu: koe: khix ex kawn: pui tom: tawng tix sawn: singāix,
khix, num, tix num koe: 12 khix phan: ang: māwh nan: koe: 365
Khix pa riang simiang pa mhawm:.
Khrawm: ex klieh vung viang: pang: khix
Riang khix khraox jhaox khrawm: tix graoh.
Khraox kāoh kix, khaing: bīx tix ma:.
Haok nyiiex paox maox vien khix.
Khix mhawm: paing daux sawm: kao: phuan:.
Khrawm: ex pāox tix daux nyiiex pex.
Yiiex kuad sinaw ah lox leng.
PUI KID KHAOX RĀUH SEE.
Ka daux tix singāix cao: kid khaox tix kaux kid khaox
praok klawng: ting, yam kid nawh khaox nawh man: moe: tix
kreuek daux rawm: heue. Cao: kid khaox an: son sang deeih
yāox nawh moe: tix cu: ca: tix sawg daux rawm: yūh ka mawx
kawx ang: yāox moe: heue. Dee nghoik cao: kid khaox an: dah
rhawm: mai: tu kap tix ngawm praok klawng: dee kreuek moe:
tix mai: ah tix nin: hoik aux tix ih phao:.
Cao: kid khaox an: yiem yo jao grai: moe: kid tix khaox,
yam an: phi: cao: pau ka klawng:, mhong: lox yiem cao: kid
khaox an: mai: phi: an: hoek ka nawh, chawk nawh ah nin: pui
kid khaox, yiem māix mai: dah rhawm: māix kheu: pa tix lie?
Kreuek moe: aux daux rawm: aux tom: yiem jao, nawh pawk
lox phi: an: ah nin: heue. Yam an: Phi: pau rawm: teei moe:
khri: jhi: pui kid khaox an: yāox, māwh in: moe: māix lie?
Nawh pawk lox ka phi:an: ah nin: ang: māwh moe: aux pa
kreuek daux rawm:,moe: aux māwh moe: rhiem: phi: an: bāox
deeih jhi: nawh yāox moe: mau, pui kid khaox bāox pawk lox ah,
ang: māwh moe: cie tix, dee nghoik phi: an: bāox deeih jhi:
nawh yāox moe: rhiem: pui kid khaox an: gāux rhawm: khawm:
pawk tix lox phi: an: mai: ah nin: lāoh lie ting buan: son:, in:
māwh moe: pa grai: aux heue.
Phi: cao: pa pau ngom rawm: an:,khaw rhawm: ka lox
pawk pui kid khaox kheu: māwh lox rāuh lox see, nawh tawx
moe: khri: moe: mau hoek khawm: moe: cao: kid khaox an: ka
nawh khawm: loe: mag heue.
Pui kid khaox an:, nawh krai pui mhong: grawng in: daux
yaong: uik heue.
Yam an: koe: pui daux yaong: kix tix kaux mhong: grawng:
an:, nawh yūh tix hu: kid nang: khaox praok klawng: an:, nawh
yūh tix lu lied man: moe: tix daux rawm: mai: yūh tix yiem grai,
riag yo, yam an: phi: pau klawng: hoek mai: chawk ah nin:, riag
yo māix jao pa tix lie? Pui an: pawk lox ah nin: kreuek moe: aux
daux rawm: yam kid aux khaox in: nūx heue.
Yam an: phi: sut moe: khri: daux rawm: mai: chawk pui an:
ah nin: māwh in: moe: māix lie? Pui an: pawk lox dom mawx
dom an: “māwh māwh” ah lox pie lhen: yūh nin: ka phi: pau
rawm: an:, yam an: phi: tawng māwh lox pie lhen: lox ang: rāuh
see phi: an: giex moe: khri: mai: grai: tan:, pui an: jalao pon moe:
khri: moe: mau, pie moe: cao: nawh ang: lai yāox, kheu: kawk
vawk, ang: rāuh rhawm: rāuh rhi: heue.
Pui ting ngawg vawk rhawm: ang: mhawm: ot
Pa rāuh pa see, dee hu: ang: die.
Simie ceu tix, chix pon uik.
Pui tīeh lu: lieh dieh yūh ot.
Pie lhen: ka pāox yāox krax kaig.
SIMIANG PRAWNG RĀUH SEE
MAI: KAWN: NYAWMPA KOE: CU:YI: TIX KAUX.
Dīx dīx koe: Tax cao mi tix kaux mai: Tax kuad hot tix
kaux mai: kawn: nyawm gau lai pa koe: cu:yi: tix kaux.
Tax cao mi an: mai: Tax kuad hot an: caw tix dēx nyiiex tau
Tax kuad an: koe: brung mīex tix mu: mai: caw tix nghe: awm:
nang: an: Tax cao mi ka koe: nang: moi mīex pa caw tix nghe:
tix mu: heue. Daux bawg yam som: tix mu: brung mīex Tax
kuad an: mai: moi mīex cao mi brieb tix kēh yam tau heue. Tax
kuad an: ang: laig it leeing: som: simie prāix nied tix riang kheu:
simie tix yāox ngai:kawn: brung tix heue.
Tax kuad an: kaoh cao cao līh jhak kawn: brung kēh cie tix,
yam an: nawx kied daox deng: ka yāox tix it kawn: biex mai:
brung mīex cie tix, te te māwh pot Tax cao mi an: pa mox tix
brīex kawn: brung mai: hu: dēuh mai: moi mīex cie cao: tix, teei
kawn: moi biex cie tix hu: dēuh mai: brung mīex cie Tax kuad
hot an: heue.
Tax kuad an: sawg kawn: brung cie tix yāox ot daux
kawg cao mi mai: moi mīex kix, Tax kuad chawk Tax cao mi an:
ah nin: yūh ka mawx māix nieb brīex kawn: brung cie aux dēuh
mai: moi mīex māix lie? Tax cao mi an: nyīah mai: pawk tix lox
Tax kuad an: khawm: ah tix nin: hoik māwh son: brah son: yawk
māix, ang: brung saux kēh moi ang: moi saux kēh brung, in:
hoik māwh mhawm: son: aux cao mi, moi mīex aux tom: kēh
kawn: brung ang: māwh lie?
Yam an: Tax kuad hot hak kiex hu: kao: ka simiang ting,
Tax cao mi an: brīex tawx mau cun: praok ka simiang an: heue.
Simiang an: prawng yūh ka mawx kawx ang: plak pui
mawx tix tie cu tix gōh grawng: an:, simiang an: ang: lai tawng
ka pa sang yūh tix, tat lox ah nin: ang: pax tie cu tix nghiet lox
aux, haok khix dim: dim: som: pon ngawb dim: taix pax deeih
vīex pāox tix hoek tin: dee ot aux, nawh tawm: lox ka kiex ah
Tax kuad an: kied dah rhawm: voi rhawm: khawm: ing: tix
ka nyiiex, yam an: Tax kuad sipub kawn: nyawm gau lai tix
kaux, kawn: nyawm an: yāox ing: Tax kuad khawm: dah rhawm:
tix nawh chawk ah nin: Tax, awm: pa ang: māix hiex nyawm
rhawm: nix lie?
Tax kuad an: pawk lox ah nin: “māwh heue”daux som: tix
mu: brung mīex aux kēh, moi mīex cao mi dēx nyiiex aux ka
kēh, cao mi an: brīex yaog kawn: moi cie tix hu: een: mai: mīex
brung cie aux, nawh teei kawn: moi cie tix, een: mai: brung
mīex cie aux yiex tom: kao: ka simiang, ang: nyiang cu tix dud
ah lox tix, simiang deeih mhaing: yiex hoek khix dim: dim: som:
mai: dim: taix heue. Aux tau rien tix som jao ang: aux yāox tix
tawx mau cun: praok ka simiang an:heue.
Yam mhong: kawn: nyawm grawng an: nawh ah nin: ka
Tax kuad an: “Tax” paw awt yūh māix khi:, son in: ang: cāox,
phan: hoek ngāix an: sax, yūh māix lha: hoek khaix Tax cao mi
an: phan: simiang chawk māix ah nin:, yūh ka mawx māix nieb
lha: hoek yūh nin: lie? Māix tom: deeih pawk lox nawh ah nin:
“ māwh heue” Tax simiang, yam hu: aux, aux hoek daux diang
klawng: aux yāox hax mhaik, aux tom: kin rawm: ka yau, mai:
yūh lung preet tix ngu ka, ngu tom: taug yeet aux lha: hoek jao
heue. Yam an: simiang teu ah nin: ka māix yhot māix ang: mawh
lie? Piang hak tiex ang: aux sax mhong: hax mhaik mai: kin
rawm: daux yau, “māwh heue awm: pa ah tax simiang tix”
piang hak tiex yie sax mhong: ex nang: kēh brung mīex kawn:
moi lie? Moi mīex kēh kawn: brung lie?
Yam an: Tax simiang an: ang: lai tawng ka lox sang pawk
tix, simiang keed rhawm: tix ka lox krai Tax kuad, māwh lox
rāuh see simiang an: sux ka cao mi an: mai grheu: nawh ing:
Ex kawn: pui kaing ceu pa tix ang: ah, phan: māwh ceu
pa māwh ah māwh, phan: mawh ceu pa ang: māwh ah ang:
māwh awx. Paw kham: mhai: sag se pa ang: māwh ang: mēh
son pāox tix liak. Kawn: nyawm in: phan: ang: gau lai nawh ka
ang: doh tawng tix gau Tax kuad an: yūh nin: heue. Paw nīeh
paw cien sau: riang rao tix gau lai yam koe: bawg yam son ex
Phan: koe: cu:yi: ang: doh khi:
Fi: fang: dee mawx nawh kawx cu.
Ngu cu tu daw caw daux krax.
Paw khin: tix yūh tuih yūh krax ot.
MEU BĀUX JU HAK TIEX VAX.
Meu bāux ju hak tiex Vax koe: (3) bāux ex kawn: Vax jāh
tom: si ngien rang: sigang: līh kaw: tiex tix loi: kaw: moi tix
bāwh kaw: raix tix pang: kaw: rang: tix peem: ex hoik dawg
māwh ceu pui pa koe: piang hak tiex nang: heue. Ex ka hoik ao:
min: ting ceu piang hak tiex, ex ang: saux sawg tix cax hak tiex
nyiiex yaong: ot pui tang: ceu tang: cad ex tang: dawg yūh tix ih
ma: tang: tix yūh kaung: pawng rawng nie, lox pa ah tax yiex
mīex keeing: ex ka in: hoik ot nang: daux tong daux ce dīx,
māwh kheu: lāux ex ka naing, ex tom: phru phrat tix ot ka
gawng piang lua, tang: ot tang: koe: khaing: pāox tix, bawg yam
an: māwh moeg, māwh kuad lang: simiang ting, kuad kie: krawx.
kuad eeng, sipug ru, pagiex kuang: piang ex, kawn koe: cao mi
ting tu pu rhom: pui tang: yaog tix ting ving tix vīeh, grhang:
hak tiex ka pāox tix, puing: naing graing cāox ex kawn: rai peu
sin: ang: yāox tix nyawm ot singēh koe: jao heue.
Kawn: pui hak tiex kha: rhom: son kraung ceep eep sawm:
rawm: nyāux kīh ih mau cai tix te te heue.
Sivoe 1969 num hoik koe: mie rheng: mie mheen: ju
mawx nieh, ang: ex lai uik simin, ex kawn: Vax tang: ot si yut
koe:, ang: pon laig līh lai ling ing: tiang dee ot pāox tix jao
puing: puah kuad prim: ka pāox tix ang: jud ang: jai heue.
Yam an: pui tang: ot tang: koe: kaung: mawx kaung: an:,
eeng mawx eeng an: ang: doh pon hoek dee ot pāox tix pui hoik
tang: tat tix dēuh meu hak tiex sinax pāox tix, ang: pon tix cax
prāix sawm: klawng: nyāux hak tiex brīex brum pāox tix tang:
lox sikah ex kawn: Vax khaing: pāox tix, tix ceeix, grawng
māwh yūh nin: (1) ang: ex yāox tix pon laig līh ka pāox tix.(2)
tang: hak tiex ot, bawg yam prāix klawng: ang: ih pāox tix.(3)
rawm: nyāux ang: awm: pāox tix, been nab yam: yung: yi: mai:
kraung ceep eep sawm: tom: tang: khaing: pāox tix ceeix ceeix
Phan: māwh been, mug tix ih ngu, hu: tix ih ma: gha: tix ih
kaing:, kid tix taung: khix bīx tix yūh kaing awm: pāox tix uik
heue. Ang: ngai: lig ngai: lai ex dawg koe: awm: koe: cie pui
tang: ceu tang: cad, lox pa ah kuad ex kix dīx, yam gūah siyiiex
tix tawx ngai: lai ka pui ku ceu dīx, kix krai caw tix tiiem cie ex
Vax piang hak moi, Tax ex kix cai: rhawm: nieb tong: tix khliak
hak lai cie ex ah kix nin: heue. Ex kawn: Vax dah dha: ex khaix
pui, rīah kaing: māwh jao ang: ex koe: ngai: lig ngai: lai, ang: ex
koe: ping nyia cu: yi: ex tom: dah khaix pui jao ku plak ku vang
heue. In: māwh bāux ju ka dīx heue.
Jāh 1969 num hoek 1989 nun khix 4-17ng āix, māwh bāux
yam ju giex kuang: pati kum miu nit hak tiex man ka hak tiex ex
kawn: Vax. In: māwh bāux ju ra: heue.
1989 num khix 4-17 ngāix, tom: kuad ex Tax Nyi lai: mai:
Tax kuad ex Tax Log pang: kraix khrawm: kru naing can pa ot
daux hak tiex Vax. Kawn: rai peu sin:, mīex mai bun: doe hoek
khawm: pui mi pui hot, kiex thong: ex pluat tix tik ka been pa
vīex kum miu nit hak tiex man daux hak tiex ex Vax. Jāh num an:
ex kawn: Vax tang: yāox tix giex kaing: hak tiex cao: tix hoek
tom: in: singāix in: māwh bāux (3) heue.
Lox si diex kuad lai: mai: kuad Pang:
Sau: riang rao yūh cao: tix ih.
Nghox kīeh naog krao: khaox.
Gaox kīeh haoh krao: prim:.
Im: yum saux ngia māwh gaox sawm:.
Mhawm: nēx mhawm: nham: kaoh khaing: gaox.
Paw tang: lox paw si yox moing.
Pui ku ceu kīeh awm: mūah tix reu ceu tix mu:.
Paw gūah ceu pui paw cheu kaing cāox.
Krax moh krax rhawm: māwh riang rao.
GRAWNG KHAOX RAIX KHAOX RUNG.
Khaox raix khaox rung, phan: kūah tix māwh khaox, ang:
tie awm: khaox tang: ceu, khaox tang: ceu phan: kūah, kūah
piang tiex uik heue. Khaox raix khaox rung koe: tom: nie
ceu, ang: ex uik tawng kaux chix si mawd ceu kix uik, grawng
kūah khaox raix khaox rung māwh yūh nin:, sim: lai: kiang ih
plix mai: aing: tix piang khaox tang: dah phan: ang: māwh nan:
ka piang rang: tom: līh kūah tan: heue.
Khaox raix khaox rung, yam jāuh kix tix kūah, kūah sinax
kak khaox tang: ceu mai: piang: rang:, yam jāuh rīah kix ang:
nyiang pon hoek ka piang tiex, kix kawn kab tix mai: khaox
tang: ceu, phan: hoek yam plix tang: deeih māwh plix raix plix
rung, phan: hoik ting pang: lang: kak kix tawb kheem: can
khaox pa kuah tix piang an:, khaix an:, can khaox an: kix yum
Khaox ox nghox khawx tawng bawg tix.
Khix num bawg yam viang rheeng: kawx ang: tīeh ang: loh
ot been tix.
Khaox raix khaox rung cung piang pui.
Teei tix ting ving tix vīeh.
Yam jāuh ang: tie kūah piang tiex
Cao: priex cao: rien yum tang: kix.
Buan: son: pon kix, kix pi prah.
Pui tix blah yam jāuh, im: klawd mai: pui tang: kaux, ang:
tawng: buan: son: pa hoik pon tix yāox hoik naog tu, pu praok
tix nieb deeih pi cao: priex cao: eei: tix ang: tie ah lāoh lie ting
buan: son:, deeih gut kheem: cao: priex cao: eei: tix awm: deeih
kīeh khaox raix khaox rung khaox pa kūah tix ka piang yum, in:
ex caw tix priex rhawm: tix ka heue.
KRAX LAW LI HAK TIEX VAX.
Hak tiex Vax māwh hak tiex haoh gawng lua klawng: ngawd,
rīeh rang: son sang hu: tang: nghox tang khix hu: laih, lai, hu:
krax lang: diang si ngai māwh tang: ex ka law brung mai: moi
khan: kix heue.
Māwh kheu: koe: krax nu kin: yūh nin: son sang doh krax
law li phai: hoek phai: hu: si nax nyiiex liep yaong: daux vawng
meung Vax tom: thong: ex paug krax law li, kīeh doh ku plak ku
Sivoe 1989 num
krax law li daux
hak tiex Vax, jāh
Pang: sang: hoek
Meung mau, hoek
Tāoh mie, kaung:
taw: Meung mau,
Ho pang, viang
māwh kawx nin:
can krax law li an: pau pon hu: ngie yam rung prāix khaing:
Krax law li in: kix, māwh Tax yiiex mīex keeing:, aik o:
pre nan ex can pa ot hak tiex vax khawm: uik, tang: vīex prāix
ih cao: tix, vīex baug si ngaong, vaig moe:, kīh ih taux rhong:
cao: tix mai: paug heue.
Jāh 1989 num Kuad Lai: Kuad Pang: son sang doh krax
law li ku dah ku dee kiex kīeh ex bāox sau: riang rao tix si toe
tix paug, yam in: ex hoik pon kaong: krax law li 3000 lhak,,
sivoe 89 num pau pon kaung: 300 lhak, khaing: heue. Krax ot
plak kraung ceep eep sawm: rawm: nyāux hoik tang si yox hu: si
nyek, jāh 1989 num hoek 1999 num, daux kao: (10)num, ex
hoik pon tom si maox (750) lhak heue.
Krax law li in: kix hoik kaoh khaing: rawm: lauh jauh
māux riang rao, mau khri: can kawn: pui pa ot daux hak tiex Vax
Paug krax law li, paw doh pi awx.
Ki kawx mie ding, paw prah krax.
Lai ling ing: tiang ang: lai nu.
Cu nghiet lox pāox yāox krax mhawm:
Krax lawng gawng hu: ang: lheu krax.
GRAWNG YEX KĪH
Yex kīh nawh kēh daux yaong: man rai, ju Tax ju yax
līh ex dīx kawn: pui ang: nyiang yāox tix ih kīh prīex ih pui ceet
ciang: baik ngie yūh nan: hoek
daux bāux ju yex kīh, daux
yaong: kix lai: loh tix kuh eep
plok taux yam bīh tix, yam caw
tix hoek bawg cie yex kīh, taux
plok nawh jiet nyawm tix rheep
jao koe: kīh tix heue. Yam an:
pui nyiiex pui yaong: kied daox
am: ka, māwh kheu pa tix pa kīeh
nyawm lie? Pui ku kaux keed
daux rhawm: tix ra: lai: chawx
pāox tix hoek ngāix khaix kix
ah nin: ka yex kīh kied nyawm
yūh māix prīex māix ca: bāox
bre ex ih prīex singāix awx.Yam an: pui hun: ploi:
pui brīex hu: jawm hu: jiang tix
yāox yam yūh Yex kīh prīex, yam
an: kix yāox krang krāh Yex kīh
tix ka piang khang: plok tix taux, chix yūh kaing brai: nu: nai:
yūh nin: ah, mai: kix pheet Yex kīh to: heue. Yex kīh to:
khaing: man: rai hu: mox tix yaong: maw: noi mai: yum
tan:,hoek tom:yam in: dee yum nawh kīh lih ka heue. Pui tang:
ceu tawng tix kin rawm: daux rang: yum Yex kīh mai: plok
rhaung: māwh kīh, kix tawng kāoh Yex kīh khaing: hak tiex vax
yaong: man rai:, kix tom: phat tawx gha: kīh tix num tix bawg,
daux yaong kaung: yaong: ting: man rai khaix heue. Māwh kheu:
caong kuan man: rai kix tix kid kaing: pui pa hoek tix tawx gha:
kīh jauh yam an: pui ang: lai tawx gha: kīh khaix heue.
Kīh līh khaing: Vax
Tax yax ang: tawng.
Gawng ang: kīh koe:
Līh awm: pui aw:.
Ih kīh ding khaw, phaw: lox pie ngaing:
Daing: nyawm taux jao kīh
Taux ang: koe: kīh līh tix nai:.
Saux ang: pai: māwh grai: pui.
Posted by ashinnyana(pyinoolwin) at 9:55 PM0comments